Wasiirka Maaliyadda Dawladda Puntland oo ku sugan degmada Xarfo
October 13, 2020 - Written by Editor
Gaalkacyo:-Wasiirka Maaliyadda Dawladda Puntland Mudane Xasan Shire Cabdi oo uu weheliyo Taliyaha Ciidanka Booliska Puntland Gen.Cabdi Xasan Xuseen ayaa kormeer ku tagay kantaroolka Cashuuraha Wasaaradda Maaliyadda ee degmada Xarfo ee gobolka Mudug.
Wasiirka Maaliyadda Puntland iyo xubnaha wehelinaya oo muddooyinkii ugu dambeeyay hawlo shaqo ku joogay degmada Xarfo ayaa warbixin kooban ka dhageystay kooban ka dhagaystay shaqaalaha caahuuraha Kastamla W/Maaliyadda ee degmada Xarfo.Mudane Xasan Shire Cabdi ayaa kula dardaarmay shaqaalaha iyo mas’uuliyinta inay ilaaliyaan amaanada loo dhiibay oo ay ku shaqeeyaan karti iyo hufnaan.
Wasiirka iyo wafdigiisa ayaa kadib usoo ambabaxay xarunta gobolka Mudug ee Gaalkacyo, waxayna ku yara ha kadeen deegaanka Cagaaran oo hoos timaada degmada Gaalkacyo ee gobolka Mudug.
Waxayna kulan is-xog waraysi ah la qaateen odayaasha iyo maamulka deegaanka Cagaaran.Odayaasha reer Cagaaran ayaa Wasiirka uga mahad ceshay shaqada uu dalka iyo dadka Puntland u hayo iyo sidoo kale shaqada wanaagsan ee uu ka qabatay diiwangalinta iyo tirakoobka ciidanka difaaca Puntland. Wasiirka ayaa dhankiisa aad ugu dheeraaday sida loogu baahanahay inay shacabku qeybtooda ka qaataan dhinacyada horumarka iyo amaanka guud ee dalka.
Mudane Xasan Shire iyo mas’uuliyinta ku weheliyey safarka ayaa soo gaaray degmada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Wasiirka Maaliyadda Puntland iyo wafdiga uu hoggaaminayo ay maalmaha soo socda tababaro kale duwan u furidoonaan ciidamada difaaca Puntland ee ku sugan qeybo kamid ah gobolka Mudug.
BaahintiiXaafiska Warfaafinta iyo Wacyigalinta Wasaaradda MaaliyaddaDowlada Puntland